गाला हेरेरै थाहा हुन्छ स्वभाव, कसरी ?
जुन महिलाको दाहिने गालामा कालो कोठी छ, ती धनी, वैभवशाली र चरित्रवान हुन्छिन् । यस्ता महिलाले आफ्ना आवश्यकताहरूलाई नियन्त्रणमा राख्छन् । उनीहरूले भौतिक सुख पनि पाउँछन् ।
जुन स्त्रीको देब्रे गालामा कालो कोठी छ, उक्त स्त्री बुद्धिमान, शिक्षामा रुचि राख्ने र सौन्दर्यप्रति लगाव भएकी हुन्छिन् ।
जुन महिलाको गाला अनुहारको तुलनामा सानो हुन्छ, तिनी धनवान हुन्छिन् र परिवारमा प्रशंसाको पात्र हुन्छिन् । यस्ता स्त्रीले आफ्ना कार्य चतुरतापूर्वक गराउँछिन् ।
हाँस्दाखेरी गालामा खाल्डो वा डिम्पल पर्ने महिला तीक्ष्णबुद्धि भएकी, विवेकशील, छिट्टोछिट्टो कुरा गर्ने तथा आफ्नो गतिविधिका कारण सबैको हृदयमा स्थान लिने खालकी हुन्छिन् । यस्ता स्त्रीले धेरैसँग प्रेम गर्छन् ।
बैशाख ११, २०७६ मा प्रकाशित
भोलि मध्यरातपछि लाग्नेछ खण्डग्रास चन्द्रग्रहण– के गर्ने, के नगर्ने ?
पोखराको लेकसाइड २४सै घण्टा खुला गर्न माग पोखरा–पोखराको लेकसाइडमा पर्यटकको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै २४सै घण्टा खुला गरी सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गरे व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष स...
छाला गोरो वा कालो किन हुन्छ ?
अनुहार चम्काउन घरमै गर्न सकिन्छ यी काम, आकर्षक हुन्छ अनुहार